एसईईपछि प्राविधिक विषय पढ्ने मन छ ? यी २९ विषय नेपालमै पढाई हुन्छ « Naya Page
एसईईपछि प्राविधिक विषय पढ्ने मन छ ? यी २९ विषय नेपालमै पढाई हुन्छ
प्रकाशित मिति : 25 June, 2018 12:15 pm
काठमाडौं, ११ असार । तपाईको एसईई नतिजा कस्तो भयो ? पक्कै सफल हुनु भयो होला । अनि अब के पढ्ने भनेर अन्योल भइरहेको छ छैन ? कि प्राविधिक विषय पढ्ने मन भएर पनि अन्योल भइरहेको छ ? कि नेपालमा के–के प्राविधिक विषय पढ्न पाइन्छ होला भनेर साचिरहनु भएको छ छैन ?
यदि नेपालमा पढाई हुने प्राविधिक विषयका बारेमा जानकारी छैन भने अब हामी तपाईलाई सोही विषयमा जानकारी दिन्छौं । एसईईमा तपाईल प्राप्त गरेको ग्रेड अनुसार नेपालमै २९ वटा प्राविधिक विषय पढ्न पाइन्छ ।
स्वास्थ्य, इञ्जिनियरिङ, कृषि तथा वनविज्ञान, आतिथ्य सत्कार र सामाजिक विषय अध्ययन गर्न पाइने छ । यी कार्यक्रमको अवधि ३ वर्षे हुने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) का सूचना अधिकारी मनोज शर्मा न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार एसईईपछि अध्ययन गर्न सकिने प्राविधिक कोर्स विभिन्न अवधिको हुनेछन् । माथिल्लो तहको अध्ययनमा अघि बढ्न सकिने र मध्यमस्तरको जनशक्तिको मान्यता पाउने तीन वर्षे डिप्लोमा नै भएको उनले बताएका छन् ।
प्राविधिक शिक्षा दुई र तीन महिने, १० महिने, १८ महिने पनि हुन्छ । अरू तालिमबाट सीप मात्र सिकिन्छ । यी छोटा अवधिका तालिमले माथिल्लो तहको स्नातक पढ्न भने पाइन्न । तीन वर्षे डिप्लोमा तह कोर्ष पढेपछि भने उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर पनि पाइन्छ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा १० वटा विषयको अध्ययन गर्न सकिने छ ।
जसमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, प्रमाणपत्र तह नेत्रविज्ञान, प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा, प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, प्रमाणपत्र तह डायाग्नोष्टिक रेडियोग्राफी, प्रमाणपत्र तह दन्तविज्ञान, प्रमाणपत्र तह सामान्य आयुर्वेद चिकित्सा, प्रमाणपत्र तह अक्कुपन्चर एण्ड अकुप्रेसर र डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी पढ्न सकिन्छ । प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा तहका स्वास्थ्यतर्फका सम्पूर्ण कार्यक्रमका लागि अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा न्युनतम सी ग्रेड र जीपिए २ अंक प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
इञ्जिनियरिङ सम्बन्धित कार्यक्रमा १२ वटा विषयको अध्ययन गर्न सकिने छ । जसमा डिप्लोमा इन सिभिल इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन जियोम्याटिक्स इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन मेकानिकल इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इक्विपमेट इञ्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेसन एण्ड एअर कन्डीसनिङ रहेका छन् ।
डिप्लोमा इञ्जिनियरिङ्ख तर्फका सम्पुूर्ण कार्यक्रमका लागि विज्ञान र गणितमा न्युनतम सि ग्रेड र अग्रेजि न्युनतम डि प्लस ग्रेट हुनुपर्ने छ ।कृषि तथा वनविज्ञानसँग सम्बन्धित कार्यक्रमा ४ वटा विषयको अध्ययन गर्न सकिने छ । जसमा डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर (बालीविज्ञान), डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर( पशुविज्ञान), डिप्लोमा इन फुड एण्ड डेरी टेक्नोलोजी र डिप्लोमा इन फरेष्ट्री छन् ।
डिप्लोमा तहका कृषि, फुडरडेरी टेक्नोलोजी र फरेष्ट्रिका लागि अग्रेजि, गणित र विज्ञान मध्ये कुनै २ विषयमा न्युनतम सि र कुनै एक विषयमा न्युनतम डि प्लस गे्रड आएले पढ्न पाउने छन् । हस्पिटालिटी डिप्लोमा होटल म्यानेजमेन्ट विषयको अध्ययन गर्न सकिने छ । जसका लागि अंग्रेजि, विज्ञान र गणितमा न्युनतम डि प्लस ग्रेड आएको हुनु पर्नेछ ।
सोसल वर्कतर्फ डिप्लोमा इन इन्टरप्रेनर्शिप डेभलेपमेन्ट र डिप्लोमा इन सोसियल वर्क्स विषय छन् । सो पढ्नका लागि विज्ञान र गणितमा न्युनतम डि प्लस ग्रेड आएको हुनुपर्ने छ । व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले पनि आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा भर्ना लिन आधार तय गरेको छ ।
तीनवर्षे डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न कम्तीमा २ जीपीए ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
सिटिईभिटी मार्फ संचालीत आङ्खिक शिक्षालय, साझेदारी शिक्षालय, सामुदायिक विद्यालय र नीजि स्तरबाट संचालित शैशिक संस्थामा कक्षा संचालन हुने छन् । सबै गरेर ४९६ शैक्षिक संस्था र १९ हजार ७४१ जना विद्यार्थी पढाउने क्षमता रहेको सिटिभिटीका सूचना अधिकारी मनोज शर्मा न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । उनले भने प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षामा नाम निकालन पर्छ । प्राविधिक शिक्षा लिए पछि बेरोजगार बस्नु पर्दैन । सिटिभिटीले शुल्क निधारणका लागि समीति गठन गरेको छ । समितिले केही दिन पछि शुल्क तोक्ने पनि न्यौपानेले बताए ।
कोटेश्वरको ‘असर्फी’ टोलमा १६ जना संक्रमित भेटिएपछि गरियो ‘शिल’